Acetyl L Carnitine | Mega Planet Co., Ltd
Acetyl-L-carnitine is the acetylated ester of the amino acid L-carnitine. Acetyl-L-carnitine is an endogenous mitochondrial membrane compound that helps maintain mitochondrial bioenergetics and lowers the increased oxidative stress associated with aging.14
Acetyl-L-carnitine and L-carnitine are absorbed into the bloodstream efficiently. Both are effective at carrying long-chain fatty acids across the membrane into the mitochondria where they are burned for energy production and utilized efficiently by the cells.15-18 Acetyl-L-carnitine also crosses the blood-brain barrier and guards against oxidative damage.5,14,19-21 Amyloid-beta peptide isaprincipal component of plaques and is thought to beacontributor to the aging process. Acetyl-L-carnitine exerts protective effects against such neurotoxicity and oxidative stress.14
Other ingredients : vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, silica.
အိုမင်းရင့်ရော်မှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသည် cell အစိတ်အပိုင်းများအတွင်းစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့ကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ယင်းအချက်သည် လျော့ကျလာသည့် cellular metabolic activity ရလဒ်နှင့် cellular debris စုဝေးမှုရလဒ်များဖြစ်ပွားစေသည်။ L-Carnitineသည် cytosol မှ cellအတွင်းရှိ mitochondria အတွင်းသို့fatty acid သယ်ပို့မှုကို ကူညီပေးခြင်းဖြင့် cellular energy metabolism ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ယင်းတွင် အဆီများအား oxidized ဖြစ်ပွားစေ၍ cellular energy စွမ်းအင် (adenosine triphosphate or ATP) ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
Acetyl-L-Carnitineသည် amino acid –carnitine ၏ acetylated ester ဖြစ်သည်။ Acetyl-L-Carnitineသည် mitochondrial bioenergetics ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည့် endogenous mitochondrial membrane compound တစ်ခုဖြစ်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်စေမည့် တိုးပွားလာသည့် oxidative stress များကို လျှော့ချပေးသည်။
Acetyl-L-Carnitine နှင့် L-Carnitine တို့ကို သွေးလည်ပတ်မှုအတွင်းထိရောက်စွာစုပ်ယူလိုက်ပြီး ယင်းနှစ်မျိုးစလုံးသည် ယင်းတို့မှ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် cells များမှ ထိရောက်စွာအသုံးချခံရန်အတွက် လောင်ကျွမ်းခြင်းခံရမည့် mitochondria အတွင်းရှိ သွေး ကြောများမှ တစ်ဆင့်long-chain fatty acid များကို ထိရောက်စွာသယ်ယူပေးနိုင်သည်။ Acetyl-L-Carnitine သည်လည်း blood-brain barrier များကို ဖြတ်ကျော်၍ oxidative damage 5,14,19,21 တို့ထံမှ အကာအကွယ်ပေးသည်။ Amyloid peptide သည် plaques ၏ ပင်မအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော် သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ထောက်ပံ့ပေးသူအနေနှင့်တွေ့ရှိရသည်။ Acetyl-L-Carnitine မှ neurotoxicity and oxidative stress များနှင့်ဆန့်ကျင်အကာ အကွယ်ပေးသည့် သက်ရောက်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
Acetyl-L-Carnitine(ALC) သည် သွေးကြောအကာအရံများကို လွယ်ကူစွာဖြတ်ကျော်နိုင်၍ ပြီးပြည့်စုံသည့် neuroprotective, neuromodulatory and neurotrophic properties များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ALC သည် နုပျိုသည့် ဉာဏ်ရည်လုပ်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး mitochondria ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုးတက်စေ၍ ၊ အိုမင်းရင့်ရော်စေသည့် oxidative damage များမှ တားဆီးပေးပြီး ပင်မ enzyme များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်လည်ရယူပေးနိုင်သည်။
နေ့စဉ် (၁)တောင့် (သို့) (၂)တောင့်နှုန်းဖြင့် (၄)ကြိမ်မှီဝဲရန် (သို့) ဆရာဝန်ညန်ကြားသည့်အတိုင်းသုံးစွဲရန်။
ဤဆေးအား နံနက်စာနှင့် နေ့လည်စာမစားမီ (၄၅)မိနစ်အတွင်း ခွဲခြားထားသည့် ဆေးပမာဏများကို အစာအိမ်အတွင်းအစာမရှိစဉ်အတွင်း ရေ (သို့) ဖျော်ရည်ဖြင့် မှီဝဲနိုင်လျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်။